Forbes Gold Nova - BaganMart
Water Cooler ( SGL 1171 )
Till Touch Electronic Cash Register
Datacard SD460 Card Printer Direct to Card
VS-A705Miracle Max Royale Under Counter Ionizer
စကားပြန် ဖုန်းဆော့ဝဲ Apk
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 530 view counts
Forbes Gold Nova
Brand : Forbes
Model : ForbGN001
လုပျငနျးအမညျ : FORBES Co.,Ltd
ဖုနျးနံပါတျ : 09 420169982,09795125275,09794078985
Dimensions (W x D x H) : : 310 x 232 x 418mm
Net Weight : 5.8 kg
Purified water output: : 2litres//min (max.)
Input Voltage : 230V AC / 50 Hz
Power Rating: : 18 Watts
Input Water Pressure: : 0.4(Min) -2.0(Max.) kg/sq.cm (29 PSI)
Input Water Temperature: :5- 45 C
Input Water Turbidity : 15 NTU (max.)
Input Water Iron: : 0.3 ppm (max.)
Input Water Chlorine :2ppm (max.)
Input Water TDS ideal upto: : 500 ppm (max.)
Forbes Gold Novaရေသန့်စက်သည် ရေတွင်အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စ်၊ခဲနှင့်ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့်အရာများကင်းဝေးစေပြီးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုစနစ်နည်းပညာများဖြင့်ဘေးကင်းစေပါသည်။Novaရွှေတံဆိပ်certifiedရရှိထားပြီးမိသားစုများကျန်းမာသန့်ရှင်းရောဂါကင်းစေတဲ့ရွှေNova ပါ။
ကျန်းမာသောlifeနှင့်ကျန်းမာသောနေအိမ်များအတွက်သာမကဝန်ဆောင်မှု များအားစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကျား၊မ မရွေးဘာသာတရားလူမျိုးအားလုံးforbes ထုတ်ကုန်များသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Smart UV သောက်ရေသန့်စက်
Forbes Enhance Ro
For Forbes Gold Nova
May I get the quotation for "Forbes Gold Nova" ?